လမ်းပတ် နဲ့ နောက်ထပ် တိုက်ပွဲ တပွဲ စတင် လိုက်တာလား … ဒက်စ်ချမ့်စ် ? - SPORTS MYANMAR
လမ်းပတ် နဲ့ နောက်ထပ် တိုက်ပွဲ တပွဲ စတင် လိုက်တာလား … ဒက်စ်ချမ့်စ် ?
ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် အသင်း ဟာ လာမယ့် ၂ပတ် အတွင်း မှာ ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ် ပွဲစဉ် တွေ အဖြစ် မော်လ်ဒိုဗာ လက်ရွေးစင် ၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား လက်ရွေးစင် အသင်း တွေနဲ့ ကစား ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ယနေ့ ညနေခင်း မှာပဲ ၄င်းတို့ရဲ့ ကစားသမား ၂၃ ယောက် ပါဝင် တဲ့ အသင်း စာရင်း ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ် ။
ထို အထဲ မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အဓိက ကွင်းလယ်လူ အန်ဂိုလို ကန်တေ ပါဝင် လာခဲ့ပါတယ် ။ ကန်တေ ဟာ မကြာသေးခင် ကမှ ဒဏ်ရာ က ပြန်လည် သက်သာ ကောင်းမွန် လာခဲ့ပြီး ပထမ အသင်း နဲ့ အတူ လေ့ကျင့်မှု တွေ ပြန်လည် စတင် နိုင်ခဲ့တာ ရက်ပိုင်း သာ ရှိပါသေးတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အေဂျက်ဇ် အသင်း နဲ့ တဖက် ၄ဂိုးစီ သရေ ကျခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အဆင့် ပွဲစဉ် မှာတော့ ကန်တေ ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အရန် စာရင်း မှာ ပြန်လည် ပါဝင် လာခဲ့ပေမယ့် လာမယ့် စနေနေ့ မှာ ကစားမယ့် ခရစ်စတယ် ပဲလေ့စ် အသင်း နဲ့ လန်ဒန် ဒါဘီ ပွဲစဉ် အတွက် ချယ်လ်ဆီး မန်နေဂျာ ဖရန့် လမ်းပတ် က ၄င်းကို အနားပေး ထားတယ် လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ထို ပွဲစဉ် မှာ အဓိက ကွင်းလယ်လူ ဂျော်ဂျင်ဟို အဝါကတ် ၅ကတ် ပြည့်လို့ လွဲချော် ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကစားသမား တဦး ဖြစ်တဲ့ မေဆင်မောင့် ကလည်း ဒဏ်ရာ ကြောင့် ပါဝင်ဖို့ မသေချာ တာကြောင့် ကန်တေ ဟာ ထို ပွဲစဉ် ကို မဖြစ်မနေ ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကန်တေ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ ကုန်ခါနီး က ပြင်းထန် တဲ့ ဒူးဒဏ်ရာ ကို ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ကာ ၊ ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီမတိုင်မီ ခြေစမ်း ခရီးစဉ် တွေ အကုန်လုံး ကို လွဲချော် ထားခဲ့ရပါတယ် ။
ရာသီ အစောပိုင်း က ပွဲစဉ် တချို့ မှာ ကစား နိုင်ခဲ့ပေမယ့် လီဗာပူူး နဲ့ ဥရောပ စူပါဖလား ဗိုလ်လုပွဲ မှာ နောက်ထပ် ဒဏ်ရာ တခု ထပ်မံ ရရှိ ခဲ့ကာ ၊ ချယ်လ်ဆီး နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် ရော ၊ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် နည်းပြ ဒီဒီယာ ဒက်စ်ချမ့်စ် ရော အနား ပေးခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယ တကြိမ် International break မှာတော့ ဒက်စ်ချမ့်စ် ဟာ ဖရန့် လမ်းပတ် ရဲ့ ဆန္ဒ ကို ဆန့်ကျင်ပြီး ကန်တေ ကို ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက် ဆင့်ခေါ် ခဲ့ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ အချိန်တုန်း က အိုက်စလန် လက်ရွေးစင် အသင်း နဲ့ ခြေစစ်ပွဲ မစတင်ခင် သွေးပူ လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းနေချိန် မှာပဲ ကန်တေ ဟာ နောက်ထပ် ဒဏ်ရာ တခု ထပ်ရခဲ့ပြီး အနားယူ ခဲ့ရပါတယ် ။ အဲ့ဒီတုန်း ကလည်း ဒဏ်ရာ ရနေတဲ့ ကန်တေ ကို ချယ်လ်ဆီး သို့ ချက်ချင်း စေလွှတ်ပြီး ကုသမှု မခံယူ စေခဲ့တဲ့ ဒက်စ်ချမ့်စ် ကို လမ်းပတ် က အမျက် ဒေါသ ထွက်ခဲ့ပါတယ် ။
ထိုစဉ် က ဖရန့် လမ်းပတ် ဟာ ဒက်စ်ချမ့်စ် ကို ယခု တခေါက် International breal မှာ ကန်တေ ကို ထပ်မခေါ်ဖို့ ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောခဲ့ပေမယ့် အခု တခေါက် မှာလည်း ဒက်စ်ချမ့်စ် ဟာ ဖရန့် လမ်းပတ် ရဲ့ သဘော ဆန္ဒ ကို ထပ်မံ ဆန့်ကျင် ခဲ့ပါတယ် ။ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် အသင်း ဟာ လောလောဆယ် လက်ကျန် ၂ပွဲ မှာ အုပ်စု အောက်ဆုံး က မော်လ်ဒိုဗာ လက်ရွေးစင် အသင်း ကို အိမ်ကွင်း မှာ လက်ခံ ကစားရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ အနိုင်ရ နိုင်ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ထို ပွဲစဉ် ကို အနိုင်ရတာနဲ့ ပြင်သစ် အသင်း ဟာ ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲ အောင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒက်စ်ချမ့်စ် ဟာ ၄င်းရဲ့ ကစားသမား အင်အား ကို အတောင့်တင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ခေါ်ယူခဲ့တာ ကို တွေ့ခဲ့ ရပါတယ် ။ ဒါဟာ ကန်တေ ကို ယခု တခေါက် မှာ လက်ရွေးစင် အတွက် မခေါ်ဖို့ အတန်တန် တောင်းဆို နေတဲ့ လမ်းပတ် ကို ဆန့်ကျင် ခဲ့တာကြောင့် ၄င်းတို့ ၂ဦး အကြား အဖုအထစ် တွေ ပိုမို ကြီးထွားလာဖို့ပဲ ရှိနေပါတော့တယ် ။
တဖက်မှာ ဒက်စ်ချမ့်စ် ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ လုံးဝ ကစားခွင့် မရတဲ့ ဝါရင့် တိုက်စစ်မှူး အိုလီဗီယာ ဂျရူး ကို ယခု တခေါက် international break အတွက် ထပ်မံ ဆင့်ခေါ် ခဲ့တာ ကို တွေ့ရပါတယ် ။ ဒက်စ်ချမ့်စ် ဟာ လမ်းပတ် ကန်တေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တောင်းဆို ခဲ့စဉ် က ဂျရူး ကိုလည်း ပွဲထွက်ခွင့် တွေ ပေးဖို့ ပြန်ပြီး တောင်းဆို ခဲ့ပါသေးတယ် ။ သို့ပေမယ့် လည်း လမ်းပတ် ဟာ ထို ကာလ အတွင်း မှာ ဂျရူး ကို လူစားဝင်ခွင့် တခါ သာ ပေးခဲ့တာကြောင့် ၊ ဒက်စ်ချမ့်စ် ဟာ ၄င်းရဲ့ ဆန္ဒ ကို ပြန်ပြီး မလိုက်လျောပေးတဲ့ လမ်းပတ် ကို ကန်တေ ကို လက်ရွေးစင် သို့ ဆင့်ခေါ်ကာ ပြန်ပြီး လက်စား ချေလိုက်ဟန် တူပါတယ် ။
အကယ်၍ ကန်တေ သာ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက် ကစားပေးရင်း တခုခု ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရခဲ့မယ် ဆိုရင် ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ International break အပြီး ကစားရမယ့် မန်စီးတီး နဲ့ ပွဲကြီး တပွဲ မှာ လက်လွှတ် ဆုံးရှုံး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။